के हाे मलेसियाको गाँठो ? – News Portal of Global Nepali
के हाे मलेसियाको गाँठो ?
25th June 2019 मा प्रकाशित
काठमाडौं – मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो। तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ? विज्ञहरूको निचोड छ, ‘ श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ।’
युवा पिट्ने सशस्त्र प्रहरी हवल्दार निलम्बित